Miarahaba tamin’ny namotsorana ireo bilaogeran’ny Zone9 ny Global Voices ary mampanantena fa mbola hitolona ho amin’ny fahalalaham-pitenenana ao Ethiopia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2015 8:52 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Deutsch, English
Ekipa Afrika atsimon'i Sahara ato amin'ny Global Voices nandritra ny Vovonana Global Voices 2012 notontosaina tao Nairobi, Kenya.
Feno haravoana tokoa ny fikambanan'ny Global Voices raha noafahan'ny fitsarana tao Addis Abeba madiodio ny bilaogeran'ny Zone9 ao Ethiopia androany [16 oktobra 2015] . Nandany 18 volana tany am-ponja ireo bilaogera, teo am-piandrasana ny fitsarana amin'ny fiampangana tsy misy fototra ho manao fampihorohoroana.
Efa nandray anjara tao amin'ny Zone9, bilaogy ifarimbonana izay mitatitra resaka sosialy sy politika ao Ethiopia izy efatra ireo ary nampiroborobo ny zon'olombelona sy ny tamberin'andraikitry ny governemanta. Nosamborina izy ireo tamin'ny Avrily 2014, miaraka amin'ireo dimy hafa mitovy aminy, ary avy eo dia nampangaina tamin'ilay lalàna ratsy laza ao Ethiopia Fanambarana iadiana amin'i fampihorohoroana, izay nampiasaina hanagadrana ireo mpanao gazety sy bilaogera malaza izay nanoratra tsikera ny ny antoko mitondra EPRDF.
Tamin'ny 2012 ny fiaraha-mientana Zone9 no nanomboka niasa niaraka tamin'ny Global Voices hanangana ny Global Voices amin'ny teny Amharic, fiteny be mpiteny indrindra ao Ethiopia. Heniky ny hafaliana tokoa i Endalk Chala, iray amin'ny mpiara-manorina ny vondrona izay nianatra haka diplaoma doktorà any Etazonia volana maromaro talohan'ny fisamborana, ka nahatonga azy ho tsy voasambotra, raha nandre ny vaovao:
I'm thrilled by the news, but the struggle is not over yet. I'm trying to compose myself to understand what happened throughout the entire period of the trial….it's a relief for me and for my colleagues and for all of us, but still there is a lot of work to do.
Ravo aho nahare ny vaovao, saingy mbola tsy vita ny tolona. Miezaka tokoa aho ny hahatakatra izay nitranga nandritra ny fotoam-pitsarana… Nisento aho sy ny mpiara-miasa ary ho anay rehetra, saingy maro ny asa mbola tokony atao
Niteny ny mpiara-manorina ny Global Voices Ethan Zuckerman :
Everyone at Global Voices is thrilled to hear of the acquittal of our colleagues who've been unjustly held for a year and a half. While we are thrilled for them and their families, we remain deeply concerned about Ethiopia's climate for online speech.
Faly ny rehetra ato amin'ny Global Voices tamin'ny fandrenesana ny fanafahana madiodio ireo mpiara-miasa aminay izay notazonina tsy ara-drariny nandritra ny herintaona sy tapany. Raha ravo izahay ho azy ireo sy ny fianakaviany dia mbola feno ahiahy amin'ny toetran'ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera ao Ethiopia.
Ny mpikambana dimy tamin'ny vondrona voalohany dia navotsotra tamin'ny 8 Jolay 2015 sady nesorina avokoa ny fiampangana azy ireo. Tsy fantatra kosa izay hanjò ny efatra ambiny mandrapahatonga ny androany 16 Oktobra. Amin'ireo efatra noahafana madiodio androany, i Befeqadu Hailu—izay mpanoratra ihany koa ato amin'ny Global Voices—dia mbola mila diovina amin'ny vesatra mihatra amin'ny amin'ny fehezan-dalàna heloka bevava ethiopiana andininy faha-257. Milaza ihany koa ireo loharanom-baovao akaiky an'i Befeqadu fa sarotra ny mbola hanohizana ny famonjana azy noho io vesatra sisa io.
Niarahaba ny vaovao ny Talen'ny Advocacy Ellery Roberts Biddle saingy nanome ako ny ahiahin'i Chala sy Zuckerman ihany koa :
It feels strange to rejoice over this acquittal from charges that never should have been filed at all, especially while many other bloggers and journalists remain behind bars in Ethiopia
Hafahafa ny mifaly amin'ny fanafahana madiodio amin'ny fiampangana izay tsy tokony ho nisy akory, indrindra raha mbola betsaka ny bilaogera sy mpanao gazety mifonja ao Ethiopia ao
Ohatra mandona avy hatrany amin'ny fahavakisan'ny rafi-pitsaran'i Ethiopia sy ny tsy firaharahiana mihitsy fahalalaham-pitenenana, nampiray ny Ethiopiana ao amin'ny media sosialy tamin'ny fampiasana ny diezy #FreeZone9Bloggers, izay nitoetra ho hery tao amin'ny Twitter hatramin'ny andro nisamborana azy ireo ity raharaha ity. Namoahan'ny Global Voices lahatsoratra vavolombelona maromaro nosoratan'ny bilaogera maro ary namoaka antsokosoko avy ao amin'ny fonjan'i Kilinto ny fanohizana ny fitantarana tamin'ity raharaha ity ka nanampy tamin'ny fitarihana ireo marathon sosialy media sy ny fanentanana tamin'ny selfie tao amin'ny Tumblr.
Naneho ny fanohanana tamin'ity raharaha ity tamin'ny alalan'ny antso ampahibemaso sy fidirana an-tsehatra ara-pitsarana ho fiarovana ireo bilaogera ny Media Legal Defence Initiative, ny Committee to Protect Journalists, ny Article 19, Human Rights Watch ary ireo fikambanana maro hafa mpiaro ny zon'olombelona. Hitan'ny Talen'ny Advocacy Ellery Roberts Biddle ho aingam-panahy hanohizana ny fandalàna ny zon'olombelona an-tserasera izao vaovao izao :
I’m so proud of all that the Global Voices community has done to support and shine light on this case….Supporters have built incredible momentum around the #FreeZone9Bloggers campaign and hashtag. Let's use this to keep moving forward, pushing to protect human rights in Ethiopia and around the world.
Afa-mirehareha tamin'ny ezaka rehetra nataon'ny fikambanan'ny Global Voices manontolo hanohanana sy hanazavana ity raharaha ity aho… Nahavita nanangana fotoan-dehibe tsy mampino tamin'ny alalan'ny fanentanana sy ny diezy #FreeZone9Bloggers ny mpanohana. Andao ampiasaina izany hirosoana hatrany, ho fanoitra hiarovana ny zon'olombelona ao Ethiopia sy manerana izao tontolo izao.
18 Jolay 2021Afrika Mainty
28 Janoary 2021Afrika Mainty
Nahazo loka ara-kolontsaina lehibe ny Foibe ara-kolontsaina Fendika ao Addis Ababa